Maal-qabeen u dhashay Canada oo soo badbaadiyay 300 oo qaxooti Muslimiin ah - Jigjigaonline
HomeWararka CaalamkaMaal-qabeen u dhashay Canada oo soo badbaadiyay 300 oo qaxooti Muslimiin ah
October 7, 2019 admin Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Jim Estill, oo ah ganacsade u dhashay dalka Canada ayaa markii uu telefishinka ka arkay dhibaatada colaadda ka taagan dalka Suriya wuxuu go’aansaday inuu gacan ka geysta caawinta rayidka ka baxsanaya dagaalada sokeeye ee dalkooda halakeeyay.
Waa nin ganacsiga guul badan ka gaaray, waxaana ka go’anayd in qaxootiga Suuirya uu u suurageliya inay dib u dejin ku tagaan dalkiisa Canada, maxaa yeelay buu yiri , ” waxay ahayd arrin mudnaan leh”.
Waxay ahayd sanaddii 2015-ka, waxaana socday qorshe ay dowladda Canada ku qaabileysay qaxooti badan oo reer Suuriya ah. Balse Jim wuxuu sheegay in dib u dhaca ku yimid qorshahaasi uu aad uga walbahaaray, sidaa darteedna uu isaga go’aansaday inuu gacan ka gaysta arrintan.
“Waan daawanayay waxa ka socdo Suuriya, waxaa ii muuqatay in dowladaha galbeedka aysan si dhakhse leh wax uga qabanayn. Dib u dhac badan ayaa jiray,” ayuu yiri 62 sano jirkan.
Jim ayaa markii uu daawaday dhibaatooyinka ay wajahayaan shacabka Suuriyaan ka ah, waxaa uu go’aansaday in si shakhsiyan uu wax uga qabto arrinta.
Lacag dhan 1.1 milyan oo doolar oo uu isaga shakhsiyan lahaa ayuu Jim u adeegsaday sidii qaxooti reer Suuriya ah uu uga soo kaxeyn lahaa bariga dhexe, oo uu u keeni lahaa Magaalada Guelph ee dalka Canada.
In Jim uu sameeyo arrintan ayaa waxaa uu hirgelisay barnaamijka is-xambaarka qaxootiga, kaas oo dalka Canada laga hirgeliyay 41 sano kahor, xilligaas oo barnaamijkan lagu caawin jiray dadka ka soo qaxaya dagaaladii ka taagnaa dalka Vietnam.
Barnaamijka oo ay meel marisay dowladda Canada ayaa muwaadiniinta dalkaas u oggolaanay inay dalkooda keenaan muwaadiniin kale, waxaan shuruudaha kamid ah in qofka uu dabari karo kharashka ku baxaya qofka uu keenayo.
Jim Estill ayaa 50 qoys oo reer Suuriya ah ka soo ka xeeyay dalka Suuriya, kuwaas oo uu keenay Magaalada Guelph, waxaana qaar badan oo kamid ah uu dejiyay isla gurigiisa. Sidoo kale kooxaha ka shaqeeya kaniisadaha, bulshada Muslimiinta iyo 800 oo qof mutadawiciin ah ayuu Jim la kaashaday caawinta dadkan, kuwaas oo gacan ka geystay dib u dejinta dadkan, markii uu geeyay dalka Canada.
Dadkan ayaa qaxootigii Suuriyaan ka ahaa siiyay guryo, u raadiyay gurya kale oo kira ah iyo dhar ay ka xirtaan qabowga, waxaana Jim uu sidoo kale qaxootiga u radiyay dad yaqaan luuqadaha Ingiriiska iyo Carabiga oo ka caawiya sidii ay caruurtooda u heli lahaayeen waxabarasho, sidoo kalena u furan lahaayen akoon bangi, una radiyaan shaqooyin.
28 kamid ah dadkan ayuu Jim toos uga shaqaaleysiiyay shirkad uu leeyahay oo ku fadhida hanti dhan 400 oo milyan oo doolar, xarunteedana ay tahay isla Magaalada Guelph, halka kuwa kalena uu siiyay lacag ay ku furtan ganacsi.
Jim ayaa guud ahaan dalka suuriya ka kaxeeyay 89 qoys oo gaaraya 300 oo qof, kuwaa soo uu ka seexan waayay dhibatada ay ku sugan yihiin, keentayna in uu nolol cusub u horsedo.
Axmad Abed oo kamid ah dadka uu Canada geeyay Jim ayaa Magaaladii uu ku noolaa ee dalka Suuriya ka soo qaxay sanadkii 2016-ka, kadib markii la duqeeyay gurigii uu ku noolaa oo ku yaala Xums.
Mahad badan ha ka gaadho Jim, waxaa Axmed iyo xaaskiisa ay nasiib u yeesheen in Jim uu geeyo dalka Canada, waxaana xaaskiisa ay haatan dukaan lagu iibiyo sigisaanta ama sharabaadada ay ku leedahay gudaha Magaalada ay ku nool yihiin.
Gargaarkii uu Jim u sameeyay qaxootigan Suuriyaanka ah ayaa sidoo kale keentay in la abaal mariyo Jim, oo la siiyo abaalmarinta labaad ee ugu sareysa dalka Canada ee lagu sharfo dadka waxtarka leh.
Julie Payette, oo abaalmarintaa gudoonsiiyay Julie Payette, oo ay soo wakiilatay boqoradda Ingiriiska, Elizabeth II, ayaa sheegay in Jim uu muujiyay waxqabad wanaagsan iyo in uu rabo in uu caawiyo bulshada, una adeego dalkiisa Canada.